फोरम नेपाल र राजपाबीचको एकता कति संभव छ ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फोरम नेपाल र राजपाबीचको एकता कति संभव छ ?
काठमाडौं। सत्तामा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकताको चर्चा सुरु भएको छ। त्यसमा पनि सरकारमा रहेको फोरमले राजपासँग एकताको पहल सुरु गरेको हो।
गत निर्वाचनमा दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम राजपा भन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संसदको निर्वाचनसम्म आउँदा फोरम दुई नम्बर प्रदेशमा ठूलो दलको रुपमा दरिएको छ।
त्यही आधारमा अहिले फोरमले दुई नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। जसलाई राजपाले सरकारमा नै सहभागी भएर साथ दिएको छ। त्यसो त दुई नम्बर प्रदेशको सरकारलाई नेकपाले पनि समर्थन गरेको छ। तर नेकपा सरकारमा भने सहभागी भएको छैन।
समान माग र मुद्दा लिएर राजनीति गर्दै आएका यी दुवै दल आखिर किन एकता गर्ने तहसम्म पुगे त?
विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दल मिलेर राजपा गठन भएको हो। मधेसमा धेरै दल हुँदा त्यसको फाइदा अन्य दलले दिन थालेको भन्दै विभिन्न गुटमा विभाजित दल एकजुट भएर राजपा गठन भएको हो। राजपा गठन हुँदा उसको प्रभाव पनि देखियो। मधेसमा अहिले पनि फोरमपछिको ठूलो दल राजपा नै हो। राजपमा सर्वस्वीकार्य नेता महन्थ ठाकुर छन्, जसलाई सबैले नेता मान्न तयार हुन्छन्।
लामो समय कांग्रेसमा बसेर निष्ठाको राजनीतिक गरेर ठाकुर निष्कलंक नेता मानिन्छन्।
आज उपेन्द्र यादव पहाडका हरेक जिल्लामा गएर भाषण गर्न सक्छन्, त्यही काम राजेन्द्र महतोलाई गर्न समस्या हुन्छ।
यता पहिलो मधेस आन्दोलनबाट चर्चामा आएका उपेन्द्र यादव राजनीतिक चतुर खेलाडी मानिन्छन्। लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी भएर पनि निष्कलंक रहन सफल यादवप्रति मधेसी जनताको आकर्षण छ। अशोक राईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादीसँग एकता गरेर उनले आफूलाई मधेसको मात्र नभइ आदिवासी जनजातिकोपनि नेताका रुपमा स्थापित गरेका छन्। आज उपेन्द्र यादव पहाडका हरेक जिल्लामा गएर भाषण गर्न सक्छन्। त्यही काम राजेन्द्र महतोलाई गर्न समस्या हुन्छ।
क्षेत्रीय दलका रुपमा स्थापित संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो संगठन करिव करिव देशैभर विस्तार गरेको छ। तर राजपाले आफूलाई तराईका जिल्लामामात्रै केन्द्रित गरेको छ। त्यसो त महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तत्कालीन तमलोपा र फोरम नेपालबीच एकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर एकता भाँडिएको थियो। अहिले पनि एकताको प्रूयास फोरम नेपालले गरिरहेको छ।
यसले एकताकालागि भन्दै राजपालाई दुई पटक पत्र पठाइसकेको छ। जसको जवाफ राजपाले दिँदै आएको छ। मंगलबार बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले पनि फोरमले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै एकताकालागि तयार रहेको जनाएको छ। फोरमले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ भने राजपाले राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। अहिलेसम्म पत्र आदानप्रदान भएपछि औपचारिक रुपमा वार्ताको पहल भने नभएको राजपाका एक नेताले बताए।
तर राजपाले भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच एकता भएको विरलै घटना भएको भन्दै फोरमलाई सरकार छोडेर आउन आग्रह गरेको छ। यसअघि राजपाले एकताकालागि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त राखेपछि मंगलबार भने राजपा केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भएको देखेका यी दुई दलले आफूहरुबीच एकता गरेर बैकल्पिक शक्ति बन्ने सपना देख्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। तर विगतलाई पनि हेर्ने हो भने राजपा र फोरमबीचको एकता त्यति सहज भने देखिँदैन। यद्यपी राजनीतिम असंभव भन्ने केही पनि हुँदैन।